Izindaba - Izindaba Zenkampani
Amandla emakethe embonini yezithuthuthu engamamitha amakhulu, enza amathuba amahle kakhulu
I-China isingenile ezinhlwini zabakhiqizi abakhulu be-sprocket emhlabeni, kepha ngokubuka kwamandla amakhulu kanye nentuthuko, ukukhishwa kwaminyaka yonke kwezithuthuthu zamapayipi ezithuthuthu kumayelana ne-1/5 kuphela lamazwe athuthukile omhlaba, futhi iningi lamapulangwe esithuthuthu namanje emhlabeni jikelele Ngaphandle kokudlula ezingeni le-C, isabelo semakethe yamazwe omhlaba yamaketanga amaShayina silinganiselwa ku-4.5% kuphela, ngakho-ke i-China isesekude kakhulu ukungena ezingeni lamandla omhlaba we-sprocket. Ngakho-ke, kuyinkomba enkulu yokuthuthukiswa komkhakha we-sprocket wase-China ukusuka ezweni elikhiqiza i-sprocket uye kumandla we-sprocket emhlabeni futhi uthathe indlela entsha yezimboni enezici zayo.
Yize imakethe yamazwe omhlaba ithinteka yizinto ezingaqinisekile futhi ezingalindelekile, ngokuthuthuka okuqhubekayo nokwenziwa kabusha kwemishini yezimboni emhlabeni, isidingo semikhiqizo ye-sprocket sizoba sikhulu kakhulu. Ikakhulukazi ama-sprocket yimikhiqizo efuna abasebenzi abaningi. Yamukela indlela yokuthengwa kwempahla yomhlaba noma ukushintshela ekukhiqizeni emazweni asathuthuka, futhi i-sprocket ingumkhiqizo wendabuko waseChina. Kusenenzuzo ethile yokuncintisana kunamanye amazwe asathuthuka, okuletha amathuba amasha kanye nendawo yokuthuthuka yomgogodla waseChina wokuqhubeka nokwandisa ukuthunyelwa kwamanye amazwe. Njengamanje, imakethe ye-sprocket ihlukaniswe yaba amabanga amathathu: aphansi, aphakathi naphakathi, okukhombisa ukuthambekela okuyisisekelo kokuthi “ibanga eliphansi linokufunwa, ibanga eliphakathi linobumnandi, futhi ibanga eliphakeme linethemba”. Kodwa-ke, i-sprocket yaseChina ayikangeni embundwini wemakethe esezingeni eliphakeme.
Ukuthuthukiswa komkhakha we-sprocket kunomlando omude, futhi amathemba okuthuthuka amanje nawo abanzi kakhulu. Kusukela ekuthuthukisweni okuphelele komkhakha we-sprocket, i-sprocket ejwayelekile izoncipha kancane kancane futhi okufunwa yimakethe kuzoncipha kancane kancane; i-sprocket engajwayelekile Isidingo semikhiqizo nesabelo semakethe se-sprocket yonke sizokhuphuka kakhulu. Kufanele kuthiwe ama-sprocket angajwayelekile ayisiqondiso sokuthuthuka somkhiqizo wonke we-sprocket. Ikhono layo lemakethe likhulu futhi linamathemba abanzi entuthuko. Ngasikhathi sinye, ngoba i-pulley yebhande ehambisanayo inezinzuzo zombili zokuhanjiswa kwesondo lebhande kanye nezimpawu zokudluliswa kwe-sprocket, isabelo semakethe se-pulley ibhande evumelanisiwe kuwo wonke umkhiqizo wokudluliswa kwamaketanga sizokwandiswa kakhulu, kanye nethemba lokuthuthuka kwalo kuzoba nethemba elikhulu. Amandla emakethe azobe engenakulinganiswa.
Ama-sprocket angajwayelekile namasondo ebhande ahambisanayo amele inkomba yentuthuko yesikhathi esizayo kanye nomkhuba wokuthuthuka kulo lonke uchungechunge lwe-sprocket neminye imikhiqizo yezingxenye zokudlulisa. Ikhono labo lemakethe likhulu impela futhi linamathemba abanzi entuthuko. I-sprocket isetshenziswa kakhulu ekudlulisweni kwemishini yamakhemikhali, imishini yendwangu, ukucubungula ukudla, i-instrumentation, i-petroleum nezinye izimboni. Indlela yokucubungula i-sprocket iyacima futhi ubuso benziwe mnyama. Lapho isilinganiso sejubane siphansi, ukusebenzisa i-sprocket yenombolo yamazinyo aphezulu kunganciphisa kakhulu inani lokuzungeza kwesixhumanisi i, umthwalo oqinile weketanga nomthwalo wokuthwala. Izinsimbi zokusakaza zensimbi zisetshenziswa kakhulu kuma-sprocket anezidingo eziphansi zokunemba noma ubujamo obuyinkimbinkimbi, njengokukhiqizwa kwamasongo endandatho. Ngakho-ke, imboni ye-sprocket inamathemba abanzi maqondana nentuthuko kanye nokusetshenziswa.
Isikhathi Iposi: Jul-07-2020